Olona khetho lubalaseleyo lwenoveli zolutsha
Uphengululo lweenoveli zolutsha
Iincwadi ezi-3 eziphezulu zikaJay Asher
Mhlawumbi ileyibhile "yabantu abadala abancinci" sisizathu sokubaleka nakuphi na ukubekeka malunga noncwadi olujolise ikakhulu kubantu abadala kunabantu abancinci. Inyani yile yokuba ababhali bolu hlobo bayanda kwiminyaka yakutshanje ngempumelelo enkulu, ngokudibanisa amabali othando kunye nenqaku eliphakathi phakathi ...
Uncwadi lolutsha phantse luthanda ukwahlula phakathi kweentlobo zothando (inguqulelo yokufikisa) kunye nefantasy okanye intsomi yesayensi. Uyazi, upapasho lweshishini ligunyazisa ukuba lucinga ukuba luyazi apho kufuneka lubethe khona ngokuqinisekileyo phakathi kwabafundi bokuqala. Nangona kunjalo, ukulunga, sinokufumana olunye uhlobo lwe ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zeBlue Jeans
Ukuba kukho umbhali woncwadi lolutsha oluye lwavela ngamandla kule minyaka idlulileyo eSpain, yiBlue Jeans. UFrancisco de Paula Fernández uxhaphaze ngempumelelo i-pseudonym entsha kunye nengcebiso yabaphulaphuli bakhe abakwishumi elivisayo. Ukusondela kubafundi phakathi kweminyaka eli-12 ukuya kweli-17 kunokwenziwa ...
Ilanga ezinzulwini zobusuku nguStephenie Meyer
Kwaye xa kwabonakala ngathi uStephenie Meyer wayethunyelwe kwenye imizabalazo yoncwadi, kwisitshixo senoveli yolwaphulo-mthetho, kunye nenkululeko ekucingelwa ukuba yayihambelana nesasa langokuhlwa, kwizithunzela zabafikisayo kunye nokulunywa kwabo yinkanuko yegalikhi nangonaphakade, ekugqibeleni oko bekungayi kuba njalo. Ngenxa kaMeyer ...
Imela esandleni, nguPatrick Ness
Ibali likaT Todd Hewitt, elichazwe kule noveli, yiparadigm yomntu ngokunxulumene nendalo yakhe. Yimeko-bume yangoku yoluntu lwethu ephathwa njengentsomi yexesha elizayo kweli bali. Umbono uthatha ukuba inzululwazi isinika njengesizathu ...
Riquete lowo nge pompadour, ye Amélie Nothomb
Olunye lweentsiba ezimangalisayo ngoku Amélie Nothomb. Inoveli yakhe yangaphambili epapashwe eSpain, The Count Neville Crime, yasisa kwinoveli eyodwa yabacuphi enoyilo oluseti ethi, xa ifunyenwe nguTim Burton, iphele ijike ibe yifilimu, kunye nemveliso yakhe yangaphambili. Kodwa kwi…
Awulohlobo lwam, uvela eChloe Santana
Kukho ixesha apho uthando lunokuba yinto engabalulekanga. Usenokukholelwa ukuba unayo phantsi kolawulo, kodwa umzuzu wokuthandana ungabuyi uhlala uphela. Ngaphandle… xa izinto ziphela zingahambi kakuhle, wothuswa kukukhathazeka. Thatha ngoburharha. Ukhe wa ...
Isimahla nguPatrick Ness
Ukujongana nemicimbi ethile yezentlalo kwimbali yolutsha kunyanzelekile ebusweni bokwaziswa kunye nokwenziwa kwezinto ezahlukeneyo ngokwahluka kwabantu. Kwaye ndithi "kunyanzelekile" kuba kukwiminyaka yobutsha apho iipateni zento esiya kuba yiyo ebudaleni zimiselwe. Ulutsha luyabhencwa ...
Sibhozo, nguRebeca Stones
Ukuze ubhale inoveli egqibeleleyo, kuya kufuneka sifumane umlinganiso womlingo onokwenziwa ngumsebenzi ojikelezayo. Kuya kufaneleka ke ukubuyekeza ukungcikivwa, ubungqongqo kunye neemvakalelo zolutsha zombhali okanye zombhali, ngezizathu, ubuchwephesha kunye nobukrelekrele bombhali wabantu abadala. KUNYE…
Amawaka Amaxesha Ngonaphakade, nguJohn Green
Inoveli yolutsha yangoku inikezela ngobuninzi bokufundwa okujolise kwiindidi ezahlukeneyo. Kukho ubomi obungaphaya kwamabali othando (ekunganyanzelekanga ukuba aphosakele, mayithi), kodwa ababhali abafuna indawo yabo phakathi kwabaphulaphuli abancinci bahlala bekwabelana ngombono omnye: ubungqongqo. Izinto ezinomdla kakhulu, uthando lothando ...
Oodade. Amaqhina angenasiphelo, ngu-Anna Todd
Imeko eguqukayo yabantakwenu yinto engayekiyo ukusothusa thina bangabazali. Kodwa ngaphaya kohlalutyo lwengqondo lwangaphandle, le ncwadi Sisters Lazos Infinitos incokola ngonxibelelwano phakathi kwabantakwenu, kule meko phakathi kwabalinganiswa abane bebali: ...